China Carbon Steel Plate plate Manufacturer and Supplier | Kunda
Mbadamba ígwè carbon, mpempe akwụkwọ carbon, carbon steel coil
Carbon nchara bu nchara nwere carbon nke ruru 2,1% site na ibu. Oyi Rolling Carbon ígwè efere ọkpụrụkpụ n'okpuru 0.2-3mm, na-ekpo ọkụ Rolling Carbon efere ọkpụrụkpụ 4mm ruo 115mm
Ejiri ya na usoro ihe eji arụ ọrụ na akụkụ ndị ọzọ, ihe owuwu ụlọ nke ihe ndozi, nchara nchara, ihe ndozi, wdg
Ndị na-abụghị alloy na-eji ihe ndị dị mkpa na-ejikarị eme ihe mgbe a gwọchara ha,
Nrụpụta injinịa yana akụkụ igwe.
Knifes, ụgbọ mmiri, akpa, tank wdg.
General carbon ígwè efere
High ewu ígwè efere
q235gjb 23 q235gjc 、 q235gjd 、 q235gje 3 q345gjb 、 q345gjc 3 q345gjd 、 q460gjc 、 q460gjd 4 q460gje
Elu-ike ígwè efere
Q390B 、 Q390C 、 Q390D 、 Q390e 、 Q420B 、 Q420C 、 Q420D 、 Q420e 、 Q460C 、 Q460D 、 Q460e 、 Q500C 、 Q500D 、 Q500e 、 Q550C 、 Q550D 、 Q620 、
Hipgbọ mmiri ígwè efere
Obere igwe na-eguzogide ọgwụ dị ala
Efere ígwè maka esi mmiri ọkụ
Elu mma carbon ígwè efere
Alloy ígwè efere
Low alloy elu ike efere
Q390 （B / C / D / E 、 4 Q420 (B / C / D / E 、 、 Q460 （C / D / E 、 5 Q550 （C / D / E） 6 Q690 （B / C / D / E）
Efere: 25/30/40/60 ect
Eriri igwe: 4/6/10/12/18 ect
Ihe mkpuchi: 1810/1250
1. Alloy ígwè efere
Ngwa: A na-eji ụdị ihe eji emepụta ihe eji emepụta ígwè dị iche iche iji mee akụkụ igwe dị iche iche na ihe injinịa. Igwe a nwere ikike kwesiri ekwesi, ya mere, ọtụtụ n'ime ha ka eji akụkụ nke akụrụngwa nwere nnukwu mpaghara obe. Dị nke abụọ bụ alloy tool steel. Dị ka a pụrụ ịhụ site n’aha ahụ, a na-ejikarị ụdị nchara a eme ụfọdụ ngwaọrụ, dịka ihe eji atụ ihe, ihe na-ekpo ọkụ na oyi, mma, wdg. . Thedị nke atọ bụ nchara arụmọrụ pụrụ iche, nke nwere ụfọdụ myocardial infarction, ya mere, ihe ndị a rụpụtara nwere ihe pụrụ iche, dịka nchara na-eguzogide okpomọkụ na nchara na-eguzogide ọgwụ, nke nwere ike izute ụfọdụ ihe pụrụ iche chọrọ na mmepụta.
2. Elu ígwè siri ike
Ngwa: Igwe dị elu nwere ọtụtụ ngwa. Otu n'ime ebe dị mkpa bụ ngwa dị na ahụ ụgbọ ala. Iji meziwanye ibu ibu nke ụgbọala, belata ọnụahịa nrụpụta ụgbọ ala, ma belata oriri mmanụ, a na-eji mbadamba ígwè dị elu arụ ọrụ n'ichepụta ụgbọala n'ụlọ na mba ọzọ. Ihe kariri, na imeputa ihe n'usoro uzo di iche agbanweela nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere usoro imeputa ihe mbu. A na-ejikarị arụpụta akụkụ akụkụ dịka mgbidi ọkụ, ogwe osisi, ebe nnyefe na akụkụ ụgbọ ala ụgbọ ala, nke nwere ike belata ịdị arọ nke akụkụ ahụ. Ọrụ hardening (ma ọ bụ nje hardening) ọnụego dị elu karịa nke ndị nkịtị ígwè efere na ike banye ọzọ mmetụta ike. Ya mere, ọ na-eji na n'ihu na azụ longitudinal osisi nke underframe na akụkụ ndị na-achọ elu ike na anwụ ngwa iji melite nchekwa nke ụgbọala. Ejiri maka akụkụ mputa ahụ, na mgbakwunye na mbenata ọkpụrụkpụ nke akụkụ ahụ, n'ihi ime achịcha ahụ, mgbe agbachara ya, agbapụta akụkụ nke akụkụ ahụ nwere ike ịba ụba, yana arụmọrụ sag arụmọrụ nke akụkụ mpụta nwere ike ka mma. National isi oru ngo ga-chepụta ma tinye ala-alloy elu-ike ígwè efere na elu-ịrị ụlọ bughi steel nchara, dị ka offshore n'elu ikpo okwu owuwu, Olympic venues, CCTV ọhụrụ saịtị owuwu, Shanghai World Expo, dams, ike ọdụ, na high- ebili ụlọ.
3 Itinye efere igwe nke mmiri
Gbochie ahu ihe ahu site na mmiri corrosion emebi mmiri, electrochemical corrosion, mmiri ntule na microorganisms. A na-eji ya emepụta ígwè efere maka okpu na elu nke ụgbọ mmiri na-aga, n'ụsọ oké osimiri na n'ime ụgbọ mmiri na-ebugharị.
4 Ngwa nke mbadamba mbadamba
A na-eji ya dị ka arịa nrụgide, na ngwongwo nke efere arịa kwesịrị ịdị iche dị ka ebumnuche, ọnọdụ okpomọkụ na mgbochi corrosion.
A na-ejikarị ya eme ihe maka imepụta mmanụ ala, kemịkalụ, nkewa gas, nchekwa na ihe ndị njem ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ yiri ya, dị ka nnukwu ụlọ elu dị iche iche, ndị na-ekpo ọkụ ọkụ, tankị nchekwa na ụgbọ ala.
Ọ na ọtụtụ-eji mmanụ ala, chemical, ike ojii, ji esi mmiri ọkụ na ndị ọzọ ọrụ.
Ji mee ka reactors, okpomọkụ exchangers, separators, * Tụkwasị na tankị, mmanụ na gas tankị, liquefied gas tankị, nuklia chernobyl shells, ji esi mmiri ọkụ rụọ, liquefied mmanụ na gas cylinders, elu-mgbali mmiri ọkpọkọ nke hydropower ọdụ, tobaim volutes na ndị ọzọ na akụrụngwa na akụrụngwa.
Nke gara aga: Eyi eguzogide ọgwụ Steel efere
Osote: Igwe anaghị agba nchara